Ihe onye umengwụ na-eme (13-16)
Etinyela ọnụ n’esemokwu na-agbasaghị gị (17)
Zere egwuregwu na-enweghị isi (18, 19)
Ọ bụrụ na nkụ adịghị, ọkụ na-anyụ (20, 21)
Okwu onye na-ekwutọ mmadụ dị ka nri na-atọ ụtọ (22)
26 Otú ahụ snoo na-ekwesịghị ịda n’oge okpomọkụ, nakwa otú ahụ mmiri na-ekwesịghị izo n’oge a na-ewe ihe ubi,Ka a na-ekwesịghị ịkwanyere onye nzuzu ùgwù.+ 2 A naghị abụ mmadụ ọnụ ma ọ bụrụ na e nweghị ezigbo ihe kpatara ya,*Otú ahụ nnụnụ na elekentịọba na-anaghị efeli ma ọ bụrụ na e nweghị ihe kpatara ya. 3 E mere apịpịa maka ịnyịnya, mee ihe e ji achịkwa anụ maka jakị,+Ma e mere ụtarị maka azụ ndị nzuzu.+ 4 Azala onye nzuzu okwu otú o si gwa gị okwu,Ka ị ghara ịbụ onye nzuzu otú ọ bụ.* 5 Zaa onye nzuzu okwu otú o si gwa gị okwu,Ka ọ ghara iche na ya ma ihe.+ 6 Onye na-enyefe onye nzuzu ihe n’akaDị ka onye na-egbupụ onwe ya ụkwụ ma na-emerụ onwe ya ahụ́. 7 Otú ahụ onye na-ete ụkwụ na-enweghị ike ịga ije nke ọmaKa onye nzuzu na-enweghị ike ịtụ ezigbo ilu.+ 8 Ito onye nzuzuDị ka mmadụ ikenye okwute n’èbè.*+ 9 Ilu onye nzuzu na-atụDị ka ahịhịa ogwu onye aṅụrụma ji n’aka. 10 Onye na-ego onye nzuzu ma ọ bụkwanụ ndị na-agafe agafe ọrụDị ka onye na-agba ụta nke ji ụta ya na-agba ihe ọ bụla ọ hụrụ.* 11 Onye nzuzu nke na-emeghachi iberiibe o meburuDị ka nkịta nke na-alaghachi n’agbọ ọ gbọrọ.+ 12 Ụfọdụ ndị chere na ha ma ihe.+ Ma ọ dị mfe inyere onye nzuzu aka karịa inyere ụdị ndị ahụ aka. 13 Onye umengwụ na-asị: “Ọdụm nọ n’ụzọ! Ọdụm nọ n’ámá obodo!”+ 14 Otú ọnụ ụzọ si emeghe ma na-emechiKa onye umengwụ si atụgharị n’àkwà* ya.+ 15 Onye umengwụ na-amanye aka n’efere nri,Ma ike iwere nri tinye n’ọnụ ya anaghị adị ya.+ 16 Onye umengwụ na-eche na ya ma iheKarịa mmadụ asaa ndị na-aza ihe bara uru. 17 Ọ bụrụ na mmadụ na-agafe agafe wee malite iwe oké iwe maka esemokwu na-agbasaghị ya,O yiri onye jidesiri nkịta aka ná ntị ike.+ 18 Onye ara na-agbapụ akụ́ ụta na-ere ọkụ nakwa akụ́ nke na-atụgbu mmadụ. 19 Ọ bụ otú ahụ ka onye ghọrọ onye agbata obi ya aghụghọ, ma sị ya na ọ bụ egwuregwu, dị.+ 20 Ọ bụrụ na nkụ adịghị, ọkụ na-anyụ. Ọ bụrụkwa na e nweghị onye na-ekwutọ mmadụ, esemokwu na-akwụsị.+ 21 Otú ahụ icheku ọkụ na-eme ka ọkụ na-eke, nkụ ana-emekwa ka ọkụ na-enwu,Ka onye okwu na ụka na-eme ka esemokwu malite.+ 22 Okwu onye na-ekwutọ mmadụ dị ka nri na-atọ ụtọ. A na-elo ya ngwa ngwa, ya abanye n’afọ.+ 23 Okwu ọma onye obi ọjọọ na-ekwuDị ka ọlaọcha a gbazere agbaze nke e ji machie mpekere ite ụrọ.+ 24 Onye kpọrọ ndị ọzọ asị na-ekwu okwu ọma iji mee ka a ghara ịmata ihe dị ya n’obi,Ma ihe juru ya obi bụ aghụghọ ọ ga-aghọ. 25 N’agbanyeghị na ọ na-ekwu okwu ọma, atụkwasịla ya obi,N’ihi na ihe asaa jọgburu onwe ha dị ya n’obi.* 26 N’agbanyeghị na o ji aghụghọ na-eme ka a ghara ịma na ọ kpọrọ ndị ọzọ asị,A ga-eme ka ndị mmadụ mata ihe ọjọọ ọ na-eme. 27 Onye na-egwu olulu ga-adaba na ya. Onye na-akwapụ nkume, nkume ahụ ga-alaghachi dakwasị ya.+ 28 Onye ụgha na-akpọ onye ụgha ọ ghara kpataara nsogbu asị,Onye na-eto mmadụ otuto elu ọnụ na-alakwa mmadụ n’iyi.+
^ O nwere ike ịbụ, “Ọnụ na-ekwesịghị ekwesị a bụrụ mmadụ anaghị ere.”
^ Ma ọ bụ “Ka ị ghara ime ka gị na ya hara.”
^ Ma ọ bụ “na-emerụ onye ọ bụla ahụ́.”
^ Ma ọ bụ “N’ihi na obi ya jọgburu onwe ya.”